Ungathola kanjani ochwepheshe abanekhono lokusebenzisa injini yokucinga?
Abanikazi bebhizinisi bama-Ecommerce, abakwa-webmasters, noma abashayeli bamabhizinisi ase-intanethi - bonke bahloswe ngenhloso eyodwa. Umgomo wabo oyinhloko ukukwenza iwebhusayithi ibonakale phezulu kwekhasi lekhasi le-search engine (SERPs). Ngeshwa, akubona wonke umuntu ongazizwa egcwele indawo eyinkimbinkimbi ye-Search Engine Optimization (SEO), hhayi ukuthi labo abanikeza izinsizakalo zemboni yezobuchwepheshe, noma basebenze eqenjini, noma i-ejenti egcwele ejensi yedijithali yezobuchwepheshe be-search engine optimization. Yingakho iningi lethu lingase lizame ukuqonda le ndaba ngokwayo, nakuba liyaziwa ukuthi liyasebenza kakhulu futhi lidla isikhathi esiningi kakhulu kunoma yiziphi izixazululo ezizenzayo. Ngakho-ke, ekugcineni sifika endaweni - sicabangela isidingo sokuba nezinsizakalo ezisebenza kahle ze-SEO ngenqubekela phambili ecacile, lapha kuphakamisa isidingo esiqakathekile sokuqasha abanye ochwepheshe abanolwazi lokusebenzisa injini yokusesha. Kodwa ungathola kanjani ochwepheshe onokwethenjelwa noma inkampani kuleyo nzuzo yezinhlinzeko ezifanele kwi-intanethi? Indlela yokwenza umehluko phakathi kohlelo lwangempela, umhlinzeki we-SEO obuthakathaka, noma ngisho nabakwa-scammers nje nje bazenza njengabachwepheshe be-optimization ochwepheshe? Ngiyakholwa ukubuza le mibuzo elandelayo futhi ngibona izimpendulo ezinikezwe ngabalingani kungaba yindlela enhle yokuqonda ukuthi ngubani. Ngakho-ke, ake sibone.
Cela ababonisi be-SEO abathembisayo ukukukhombisa ubufakazi babo,. e. , uhlu lwamaklayenti abo asekuqaleni nalabo abemi. Ochwepheshe abasebenzisa ukusesha injini ngeke bakwazi ukungabaza ukukunikeza lonke ulwazi oludingekayo ngolwazi lokuxhumana. Ukwenza kanjalo, ungakwazi ngokushesha ukuthola uma umhlinzeki we-SEO ofanelekile, noma akukho lutho kuwo. Ungabheka kuphela noma yimaphi amaphrojekthi awo wangaphambili nganoma yimiphi imiphumela emihle yangempela kwizinga eliphezulu lokusesha.
Buza ukuthi bazokwenza kanjani ukuthi iwebhusayithi yakho ibe ngcono kakhulu kuma-SERP. Isiphathimandla se-SEO esisebenzayo ngeke sinqabe noma yikuphi, ngisho nokujulile, ingxoxo noma uphenyo. Kumelwe uboniswe ngokuqondile isikhathi sokuhlela okuqondile nemizamo yabo ye-SEO ezayo ngesinyathelo sakho senkqubela yentuthuko ngenkathi uhlangana nezinhloso zakho jikelele ekugcineni.
Qinisekisa ukuba nenhlolovo yezobuchwepheshe efakwe kwisiphakamiso senkampani abanikeza yona. Umbiko onjalo kufanele uhlanganise ukuhlaziywa kwazo zonke izinkinga zobuchwepheshe iwebhusayithi yakho ebhekene nayo okwamanje. Ngisho ukuthi kufanele uboniswe ngesikhathi esisodwa ukuthi yiziphi izinkinga, ikakhulukazi, ezivimbela isayithi lakho ukuthi lingabonakali ukukhuthazwa.
Hlola indlela labo ochwepheshe be-search engine optimization bazoyilandela ngayo izibalo zewebhusayithi yakho. Ngesikhathi esifanayo, qiniseka ukuthi unikeza wonke amaklayenti ukufinyelela okuqondile noma okungenani ukwabiwa okuhleliwe kokuthola kwabo, okusekelwe ngemininingwane enembile kakhulu kusuka ku-Google Analytics.
Futhi lapha siza kumbuzo obaluleke kakhulu. Mane nje ubacele ukuthi bangakunika yini isiqinisekiso sokuboniswa phezulu kwe-SERPS, ngisho ukuthatha inombolo yendawo eyodwa ohlwini lwemiphumela yokusesha. Uma kufanele kwenzeke ukuthi unikezwe impendulo eqinisekisayo, ungangabazi ukushiya "lochwepheshe" onjalo ngesaziso esifushane. Ochwepheshe be-Real search engine nokwenza kahle ngeke baxelele iklayenti njengento engafanele. Abantu abangenangqondo, noma okubi nakakhulu, abakwa-scammers bangenza kanjalo ukuze bakhohlise amakhasimende alula futhi angenalwazi Source .